WARAYSI AAN LA YEELANAY LAACIB JOORJE - Kubadda Somali Sport Portal
Kubadda Webmaster / Tuesday, December 2, 2008
Hadal haan ma buuxshee wareesigii aan la yeelanay boortiyeeri heer Qaran Xasan Sheikh Awees (Joorje) ayaa waxa uuu dhacay qaabkan:
Marka hore, Joorje, ku soo dhawaaw shabakada kubadda.com, waana kaaga mahad celinaynaa ogolaanshaha aad noo siisay, Waqtigaada iyo in aan wax ka qorno Taariikh nololeedkaadii.
Joorje: Dhib ma lahan, akhyaarta idinkaa mudan, aad ayaadna u mahadsan tihiin, anigaba waxay ii tahay fursad qaali ah.
Hadaan ku biloowdo su'aashayda horta. Ma noo sheegi kartaa sanadkii kuugu horeeyay ee aad cayaaraha ku soo biirtay hadaad xasuusato?
Goormee ayaad ku soo biirtay kooxihii dalka ka dhisnaa ama degmooyinkii gobalka banaadir?
Joorje: Sanadii 1972 ayaa waxaan u soo wareegay gobalka Banaadir, anoo ka soo wareegay gobalkii Shabeelada Hoose gaar ahaan degmadii aan ku dhashay ee Baraawe. Kadib, waxaana kaq mid noqday dhalintii mataleesay degmada Xamar Jab Jab ee seri B ayaana u cayaray, isla sanadkaas ayaa lay qaatay gobalka Banaadir.
Kooxihii heerarka kala duwanaa ee ka jiri jiray dalka goormee ayaad si toos ah uga mid noqotay naadigeese ku biirtay?
Ma xasuusan kartaa xiligii aad ku biirtay kooxdii aad caanka ku ahayd?
Joorje: Aad iyo aad waxaa jirta kooxdii aan caanka ku ahaaee la oran jiray Badda, anigoo ku biiray sanadii 1974-tii lana soo joogay ilaa iyo bur burkii, lana qaybsaday Guulo aad u tiro badan.
Ma noo sheegi karta xiligii kuugu horeysay ee aad matasho xulka Qaranka Soomaliyeed iyo meesha uu ku wajahnaa sanadaas?
Joorje: Waxaan Qaranka Soomaliyeed ku biiray sanadii 1974 xiligaas oo aan safar u galnay wadanka Ugandha.
Intii aad cayaraha ku dhex jirtay safaradii aad ku tagtay dalka dibadiisa adoo naadi ah ama adoo xul Qaran ah wax ma nooga sheegi kartaa?
Guushii ama guul daradii kuugu xumayd ee ku soo marta intii aad cayaaraha ku jirtay, wax ma ka xasuusataa? Joorje: Hadaan ku hor maro Guuldaradii I soo martay waxaan xasuustaa cayaar haddii aan guulaysano ama barbardhac aynu galno aan ku qaadi lahayn koobka horyaalka dalka Soomaaliya, cayaartaas oo na dhex martay anaga iyo kooxda Horseed sanadii 1978-dii. Waxaana nalooga badiyey 2 - 1 gool, marna ma hilmaamo cayaartaas.
Guushii iigu farxada badnayd waxay ahayd sanadii 1985-tii oo kooxdeenii Badda, aan ku guulaysanay horyaalka dalka, ayadoo ciyaaraha ka harsan yihiin todobo kulan.
Markii aad garoomada ku jirto maadaama aad aheed gool haye, yaad is laheed markuu kaa soo horjeedo waa uu ku dhibaa oo aad necbaneed xirfad ahaan ama darbo xooganaan?
Joorje: Walaahi koleey mar hadii aad tahay gool haye, waxaan u maleenayaa cid alla cidii kaa soo horjeedaba in aad necbaanaaneyso, haba lakala dar naadee waxaanse aad u necbanaa oo markeey iga soo horjedaan aan aad uga baqan jiray lacibiinta kala ahaa Saciid Ducaale, Axmed Saqiir, Nuur gaab, Shiiqaaloow, Maxamed Cismaciil, Cafiif iyo Bin shaakir, kuwaasi ayaan is lahaa marka ey kaa soo horjeedaan ameey dhidid badani kaa keeni jireen.
Mar hadaan ka hadalnay dhanka naceebka waxaa lama huraan ah in aan u jaleecno dhanka jaceelka yaad jecleed ineey garbahaada ka cayaraan oo aad markeey kula jiraan aad ku qanacsanaan jirtay?
Joorje: Waxaan aad u jeclaa in eey gar baheyga ka cayaaraan laacibiinta kala ah Abuukar weyne, Diini, Nuur C/qaadir, Jamaal, Axmed Cismaaciil, Shariif Maxamed Abele, Cali Sheikh Cadoow, C/laahi Cabdi (dheemanka) ,Xasan Cadoow, Salaad Shiino , Cumar Cadami iyo Dude iyo waliba asxab kale oo an halkani ku soo koobi karin magacyadooda.
Maxaa kugu naxdin badnaa intii aad cayaaraha ku guda jirtay? Joorje: Walaahi saxiiboow intii ka danbaysay xukumadii Siyaad Barre, ninkii joogay dalka naxdin ma mooga, ninkii rabana naxdin ha imaado Soomaaliya. Laakiinse xiligii hore, ee aan lahayn dowlada waxaan ka naxay oo aan cabsi dareemay markii laygu wareejiyay goolhayaha xulka Qaranka Soomaaliyeed oo uu waqtigaas qaban jiray Jeylaani Khaliif. Naxdintana waxaa keenay waxaan u arkayay xilkaas xil aad u culus oo sidii looga soo baxo ay aad u adag tahay.
Maxaa kugu yaab badnaa oo aad aragtay ama adigaba ku soo maray? Joorje: Waxaa iigu yaab badnayd, caga bararkii doon ayaan raacay si aan kaluumaysi ugu shaqaysto, waxba waan ka soo heli waayay. Waxaan go,aan ku gaaray inaan aado Jowhar, nasiib xumose hadana waxaa ii gooyay baabuur raacii, waxaan go'aansaday in aan lugeeyo, waxaana lug ka bilaabay Xamar, kuna tagay lug ilaa iyo Jowhar, kadibna Beer faloow ayaan galay, waqiyada qaarkoodna Sanbuus duboow, si aan uga helo nolomaalmeedkayga. Ma xumeen, waa xirfado cusub oo igu soo siyaaday.
Markii aad is bar bar dhigto kooxihii dalka ka jiri jiray bari samaadkii iyo bur burkii ka dib maxaa farqi ah oo u dhaxeeyo markaad ka eegto dhan walba adoo kaashanaya waayo aragnimadaada?
Maxaad hada qabataa? Joorje: Hadda waxaan tababaraa ciyaal yar yar ah, oo la rabo inay noqdaan goolhayayaal mustaqbalka danbe, waxaana soo aruuriyay naadiga F.C.ELMAN .
Kubadda ugu danbeen yaad jeceshahay in aad halkan wax ka tiraahdo?
Joorje: Ugu horen waxaan u mahad celinaya bahda kubadda.com oo aan runtii is dhihi karo waa bah jecel horumarka sportiga, waliba waxaa intaasi u dheer in eey mar waliba isku shuqliyaan in eey ka haqabtiraan guud ahaan dhaq dhaqaaqa sportiga ee ka jira meel walba oo ka tirsan caalamka iyo taariiqdii laacibiintii kala duwanaa ee dalka soo maray.
Intaas kadib waxaan kaloon halkaan ka salaamayaa dhamaan asxaabteydii hore ee ku kala nool Aduunka daafihiisa intiiba ka nool, inta dhimatayna waxaan Ilaahay uga bar yayaa in uu Janadii fardowsa ka waraabiyo.
Hadaba hadan dib u jaleecno Joorje waxa uu hada ku nool yahay magalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir, waa xaasle leh dhoor caruur ah, wax xil ah oo uu ka hayo sportiga hada ma jirto marka laga reebo mashruucyada naadiga Elman.
Waxaa soo Waraystay: Mahad Axmed Tagoow
Previous Article WAA MAXAY SOON?
Next Article TAARIIKH NOLOLEEDKII ABUUKAR ABANUUR MAXAMED